Atụmatụ Atụmatụ Maka Ọdịnaya nke Semalt Atụmatụ Maka Ọkwá Ọ bụla
Ịntanetị ejirila ndị ọchụnta ego, ndị ahịa, ndị na-ede blọgụ, ndị mgbasa ozi naha nile na-asọmpi maka uche gị. Ozugbo ole ọdịnayana-arịwanye elu n'ụzọ dị ụba, enwere nnukwu pasent nke ihe ndị dị ala na-apụtakwa ụbọchị. E nwere ọchịchọ ịhapụ ọdịnaya dị ala iji "hyp" ma nwetachọpụtara. Ka o sina dị, maka azụmahịa ọ bụla, nke na-eche na ọganihu dị ogologo,ọ dị mkpa igosipụta onwe ya na ọdịnaya dị elu. Ị kwesịrị ịzụ ahịa dị ka ngwaahịa ahụ n'onwe ya. Julia Vashneva, onye nduọkachamara Semalt Digital Services, na-akọwa ihe ahịa azụmahịa kwesịrịka ụlọ ọrụ ọ bụla were ọrụ iji mee nke ọma.
Ọ na-amalite site na ịmepụta ọdịnaya dị elu. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ịntanetị, mgbe ahụ ahịa ahịakwesịrị ịbụ obi nke azụmahịa gị. Ọ dịghị mkpa ihe niche ahịa ị nọ na ya,ihe ị na-ere, na ihe bụ ọnụ ahịa gị. Ụzọ ị na-eweta onwe gịkọwaa ọdịdị azụmahịa gị, aha ọma, na ige ntị na-ege ntị. Dị ka onlineonye na-ere ahịa, ị ga-enye ndị na-ege gị ntị ozi dị mkpa, na-eche echiche.
Kama itinye ndị ahịa gị n'okpuru nrụgide nke mgbasa ozi na-eme ka ndị mmadụ kwenye,gbalịa ịkụziri ndị mmadụ ihe, nyere ha aka ime mkpebi ndị dị mma. Mee ka ha nwee mmetụtandị nwere ọgụgụ isi, ndị nwere ezi uche, ndị na-azụ ahịa, na ndị na-etinye ego, na ị ga-eme ka ahịa dị elu.Nọgide na-ekepụta ihe ndabere na ihe ọmụma na-aga n'ihu. Ya mere, ị ga-enweta obi ikena nlekota ahia gi. Mgbe ị bụ ebe iyi egwu nke ngwaahịa na ozi,ihe ndị ị na-atụ aro na ị ga - abawanye uru.
Nkwurịta okwu na ndị na-ege ntị dị oké mkpa maka ịmepụta azụmahịa dị ogologo oge. Ihe omuma gina-anọchi anya olu gị, nke bụ ngwá ọrụ kachasị maka onye ọ bụla nke na-agba ahịa, blogger ma ọ bụ marketer.Mgbe ị nwere ihe dị mkpa ikwu, ị ghaghị ime ka ọ nụ. Kpebieụzọ kachasị dị irè iji sụgharịa echiche gị.
E nwere ike ikwu ya na ihe odide 140 ma ọ bụ ihe dị obere? Gbalịa tweeting ya. Ị chere na ọ nwere ike ịbụ blogpost? Tinye ya na saịtị gị, ibe onye ọzọ, mepụta akwụkwọ akụkọ maka ndị na-ege gị ntị ma ọ bụnyefee ya na magazin maka mbipụta ya. E nwere ọtụtụ ụzọ isi kesaa ọdịnaya gị.Chee echiche banyere onye ị na-agwa okwu. Ọ bụ ndị na-ege ntị na YouTube? Ma ọ bụ, ma eleghị anya, naAkwụkwọ akụkọ ga-adaba mma? Cheta, ọ bụ ụzọ kachasị mma iji kwurịta okwuna ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị na - agụ akwụkwọ gị.
Mee Mmekọrịta Dị Mkpa
Ọ bụrụ na ị nụlarịrị ịme ihe n'ihu ọha, ịmepụta, ma ọ bụ ahịa ahịa,ị nụrịrịrịrị nke a. Ma, enweghi ike ikwu ya. Mara ndị na-ege gị ntị.Ihe nwere ike ịba uru karịa azụmahịa gị karịa mmekọrịta gị na yaụmụazụ gị? Mara ha. Mara onye ha bụ, ihe ha chọrọ, na ihe hamkpa dị. Gwa ha okwu kwa ụbọchị iji mee ka mmekọrịta gị na-eto eto.
Na-arụ ọrụ na ihe nke ọdịnaya ma mee ka onye na-agụ ya baa uru. Ị ga-emeJide n'aka na ọdịnaya ị na-ekerịta bụ nke bara uru. Tinye onwe gị naakpụkpọ ụkwụ ndị ahịa gị. Ị ga-achọ iwepụ oge gị n'ịgụ ihe ndị na-adịghị mkpa?Ọfọn, ọ dịghị onye ga-amasị ya. Ma ozugbo ị na-eweta echiche dị ịrịba ama ma na-adọrọ mmasịozi ndị na-ege gị ntị, ha ga-eji obi ụtọ kwụọ gị ụgwọ.
Tinye ndị na-ege ntị
Nwee uche gị ma lee anya na mmụọ ozi dị iche iche na ọdịnaya gị. Ịbụ ihe naiche echiche nke igbe ahụ na - eme ka mmekọrịta gị na ndị na - ege gị ntị dị ike. Ọzọkwa,ka ha mara gị. Tinye aha gi, foto gi na obere-bio si n'ebe ah uọdịnaya gị. Meghee ụzọ ma hapụ ndị mmadụ. Mgbe ndị mmadụ na - ejikọta gị dị ka ammadụ, ha nwere ike ige ntị n'ihe ị na - ekwu.
N'ezie, mmemme a nile na-aghọ akụkụ nke usoro atụmatụ ahia gị dị ka ogeaga. Ị ga-agbaso echiche ndị a mgbe nile ịghọ onye ndú na ụlọ ọrụ gị.Ndị ahịa niile nke Semalt mara na àgwà nke ọdịnaya bụ ego na-adịte akanke na-enye gị ụgwọ ọrụ dị ukwuu. Olu gị na-emepụta ngwaahịa gị Source .